Laharam-pahamehana eto amin’ny firenena Misambadidaka tanteraka
Mampametra-panontaniana ankehitriny ny fomba fametrahan’ny fitondram-panjakana ny tokony ho laharam-pahamehana amin’ny fitantanana ny firenena. Ekena fa anatin’ny ahamehana ara-pahasalamana izao ny firenena.
Ny Artemesia, hoy ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, no hanavotra ny firenena. Toy ny mamporisika ny mpiray tanindrazana izany hoe mambole izany Artemesia. Aiza ho aiza ny fanampiana sy famatsiana ireo mpamokatra vary sy tantsaha eto an-toerana mba hiadiana amin’ny kere sy mosary? Manomboka miverina mipetraka koa ankehitriny ny fanontaniana hoe ny fananganana tanana vaovao ve izao no tokony himasoana sa ny famoronana asa ho an’ny tanora? Vao mainka misambadidaka tanteraka ankehitriny ny laharam-pahamehana eto amin’ny firenena raha toa ka efa hatrany am-boalohany no nahafanina ny hoe ity IEM ity ve vina sa fandaharan’asa sa tetikasa? Teo koa ny hoe iza ilay tena ho ampiharina? Velirano sa PGE sa io IEM io tokoa? Misambadidaka tanteraka!